Nahazo alalana avy amin’ireo mpitantana ao an-toerana ny fihaonamben’ireo mpanohitra vakisiny ao Torkia · Global Voices teny Malagasy
Izany no fihetsiketseham-panoherana goavana indrindra notanterahan'ny anti-vakisiny ao Torkia
Voadika ny 21 Septambra 2021 4:37 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, عربي, Ελληνικά, English
“Fitsapana fitempon'ny fo miaraka amin'ny fandraisana naoty sy fanindronana ary soratra #COVID19″ avy amin'i wuestenigel ary nomena lisansa CC BY 2.0
Mponina ao Istambul sahabo ho 3000 no nifamory tamin'ilay fihaonana “Fifohazana Lehibe” ho fanoherana ny vakisiny, fitiliana PCR, ary ny fitondrana maska eny an-dalambe tamin'ny 11 Septambra.
Io no hetsi-panoherana goavana indrindra avy amin'ireo mpanandra-teny manohitra ny vakisiny izay azo heverina ho vitsy an'isa ihany ao Torkia hatramin'ny nilazan'i Torkia ny fisian'ny tranga COVID-19 tany amin'ny fiandohan'ny taona 2020. Tatitra tany amin'ny sehatra no nahitana olona an'anarivony mivory ao amin'ny tany fanaovam-pihaonana Maltepe ao Istanbul, tsy manao maska, ary tsy manaraka ny fitsipiky ny tsy-fifampikasohana.
Tao amin'ny toerana antsoina ho Maltepe, tanàna itatr'i Istanbul, no nanaovana fihetsiketsehana ary nakatoavin'ny Biraon'ny Governoran'i Istanbul. Mpanohitra fanta-daza maro amin'ny vakisiny no nanatrika ny fihaonana izay nahitana dokotera, mpikatroka, artista sy mpanoratra. Nandritra ny kabary teny an-tsehatra, Abdurrahman Dilipak, mpanao matoan-dahatsoratra avy amin'ny gazety pro-governemanta Akit no niteny fa tsy marina ny isan'ny olona tratra sy/na matin'ny COVID-19 ary ny tanjon'ny fizarana ireny isa ireny dia ny mba hampatahotra ny olom-pirenena. Nandahatra fitakiana dimy i Dilipak nandritra ny fihaonana, ka ao anatin'izany ny fanakatonana ny biraon'ny OMS [Firenena Mikambana misahana ny Fahasalamana] ao Ankara, ny fitakiana hanesorana ny hanaovana fitiliana PRC sy ny hanesorana ny tsy maintsy hanaovana maska.
Ireo izay tsy afa-nanatrika ny fihetsiketsehana kosa nanatevin-daharana ny hetsika Twitter amin'ny fanarahana ny farangoteny #HerYerMaltepeHerYerDirenis (na aiza na aiza Maltepe, na aiza na aiza feno fifaharana):
Ampahafantaro ny rehetra: tsy ho lasa andevo isika!
Hifahatra hatramin'ny farany isika
Tsy mila maska
Tsy mila vakisiny
Tsy mila fitiliana
Tsy nitakiana hampiseho porofo fa natao vakisiny na miiba tamin'ny fitiliana COVID ny mpandray anjara tamin'ny fihaonana, izay mifanohitra amin'ny fitsipika farany ara-pahasalamana napetraky ny governemanta vao nohavaozina tamin'ny 6 septambra.
Vao tamin'ny herinandro, takian'ny fitsipika vaovao ny porofon'ny nanaovana vakisiny na fitiliana miiba tamin'ny PCR tamin'ireo sidina ifanohizan'ny tanàna roa, fitateram-pahoaka, ary ho an'ireo manatrika lanonan-dehibe tahaka ny kaonseritra na teathra na sehatra ankalamanjana toy ny sekoly na sinema.
Araka ny tondro farany indrindra, 48,3 isanjato amin'ny mponina manontolo no vita vakisiny feno, ary 61,8 isanjato no efa nandray vakisiny daozy iray farafahakeliny. Koa satria tamin'ny 6 Septambra ny fanamarihana ny fanombohan'ny taon-tsekoly iverenan'ny mpianatra tenany any an-dakilasy, nampidinin'ny governemanta ho hatramin'ny 12 taona ny fahazoana manao vakisiny, raha natao ho an'ny 15 taona no ho mihoatra izany teo aloha. Ary nefa mbola tavela eo amin'ny 20.000 isan'andro ny isan'ny tratra. Miditra ao amin'ny dingana fahatelo amin'ny fanandramana ny vakisininy manokana, Turkovac, amin'ny olombelona ihany koa i Torkia. “Efa eo amin'ny dingana fankatoavana hampiasana azy maika ilay vakisiny (mbola) tsy miasa ary nanambara ny minisitry ny fahasalamana Fahrettin Koca tamin'ny herinandro fa hanomboka amin'ny oktobra ny fanamaroana azy ho an'ny daholobe raha vantany vao mahazo fankatoavana,” hoy ny tatitry ny Daily Sabah. Ho andramana voalohany any Kyrgyzstan ny Turkovac, araka ny tatitry ny fampitam-baovao.
Tamin'ny 7 Septambra, nanambara ny minisitry ny fahasalamana Fahrettin Koca fa farafahakeliny tranga roa amin'ny kinova vaovao Mu no voarakitra ao amin'ny firenena. Hatramin'ny naha-tsikaritra azy voalohany tany Colombia tamin'ny Janoary 2021, dia tsikaritra tany amin'ny firenena farafahakeliny 39 ny kinova Mu.
Raha iverenana indray ny amin'ilay fihaonambe, tsy mahaliana amin'ny mpanatrika izay kinova vaovao sy ny halakin'ny fielezany. “Lazain-dry zareo fa toka-maso sy anti-siasa isika. Tian-dry zareo ny hampanaovana vakisiny antsika, tahaka ny biby. Noforonin'ny Orina Mpanasoa Bill Gates, tati-baovao avy amin'ny BBC no nanombohan'ny valan'aretina,” hoy i Dilipak nandritra ny kabariny. Nanaiky ny sasany tamin'ny vahoaka. Nandritra ny antsafa nifanaovana tamin'ny Gazety mivoaka isan'andro Hurriyet, nilaza ny mpanatrika iray, “Kilalaon'i Bill Gates izany vakisiny izany. Nanomboka nampanao vakisiny ry zareo tao anatin'ny telo volana. Te-hampanao antsika ho raboto ry zareo. Hampanao antsika ho vahoaka marary ry zareo.” Notakian'ny tangoron'olona ihany koa ny hialan'ny minisitry ny fahasalamana.
Tsy tian'ny olona ny iheverana azy ho mpitondra aretina, ho tsy madio. Tsy te-hanao maska any an-tsekoly ny mpianatra. Tsy tian'ny ray aman-dreny ny hampanaovana ny zanany fitiliana hatrany. Momba ny fahafahana izany rehetra izany.
Misy ny hafa tonga eo ho fanoherana ny fameperana vaovao. “Maska, vakisiny na fitiliana mety tsy maintsy ho atao daholo ireo. Tonga eto izahay hanambara ny tsy fahafalianay ny amin'izany,” hoy i Erdem Boz, izay nanatrika ny fihaonambe tamin'ny 11 Septambra.
Notsikeran'ny manampahaizana manokana momba ny fahasalamana ireo mpandray anjara tamin'ny fihaonambe sy izay nolazain'ireo. Nilaza ny profesora Necmettin Ünal, spesialista amin'ny fikarakarana marary maika sy feno sy mpahay mpanatorana ao amin'ny fakiolten'ny fitsaboana ao amin'ny oniversiten'i Ankara, fa zavatra iray ny misalasala amin'ny hampanaovana vakisiny, fa zavatra iray hafa ny filazana fa “tetika maizina natao hanafoanana ny foko tiorka” ny vakisiny.
Ny hafa moa manontany hoe nahoana fotsiny izao no azo notanterahana ity fihaonana ity. Hatramin'ny herintaona, tsy matetika izany fihetsiketsehana izany — indrindra raha hanoherana ny governemanta — ary ahitana fidirana an-tsehatra ataon'ny polisy an-kerisetra [mg] raha mbola mitranga izany. Hatramin'ny fotoana nanoratana dia nanakombom-bava ny antoko eo amin'ny fitondrana ny Antokon'ny Rariny sy ny Fampandrosoana amin'ity fihaonambe ity.